Soo dejisan Waze 3.9.6.0 – Vessoft
Maps, Network Bulshada
Soo dejisan Waze
Waze – Navigator bulsho oo loogu talo galay si aad u hesho macluumaadka ku saabsan dhacdooyinka ka jira wadada. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto macluumaadka ku saabsan cufnaanta gaadiidka, caqabado kala duwan, xawaaraha la ogolaan karo, goobta saldhigyada booliska iyo isbedel kale in xaaladda waddada. Waze u saamaxaaya in ay boostada qoraalada ku saabsan qaybaha qaarkood ee wadada oo ay ka wada hadli faahfaahinta la isticmaala dadka kale haddii loo baahdo. Software memorises ee dalal caadiga ah ama waddada safarka iyo si toos ah iyaga cusboonaysiisay tixgelinayo dhacdooyinkii hadda waddooyinka. Sidoo kale Waze kuu ogolaanaya in aad ku xidhi account u shabakadaha bulshada oo caan ah oo ay is dhaafsadaan macluumaadka kale ee khuseeya saaxiibadaa.
Galitaanka ah macluumaad ku saabsan dhacdooyinka hadda waddooyinka
Versions Alternative waddooyinka
Isgaarsiinta la users kale
Isku dhex leh shabakadaha bulshada oo caan ah
Waze Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Google Maps 9.14.0
Maps Software ayaa si sax ah muujiyaan dalalka ama gobolada oo si toos ah loo ogaado dariiqyada. Sidoo kale software ka taageertaa codka GPS-navigation ee baabuurta iyo noocyada kale ee gaadiidka.
العربية, English, Українська, Français... Pinterest 1.9.5